Numeri 13 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Vasori 12 vanotumwa kunoongorora Kenani (1-24)
Vasori 10 vanotaura mashoko anopedza vanhu simba (25-33)
13 Jehovha akataura naMozisi, achiti: 2 “Tuma varume kuti vanosora* nyika yeKenani, yandiri kupa vaIsraeri. Padzinza rimwe nerimwe reimba yemadzitateguru, unofanira kutuma murume mumwe chete. Mumwe nemumwe anofanira kunge ari muchinda+ pakati pavo.”+ 3 Saka Mozisi akavatuma kubva kurenje reParani+ sezvakarayirwa naJehovha. Varume vacho vese vaiva vakuru vevaIsraeri. 4 Aya ndiwo mazita avo: wedzinza raRubheni, Shamua mwanakomana waZakuri; 5 wedzinza raSimiyoni, Shafati mwanakomana waHori; 6 wedzinza raJudha, Karebhi+ mwanakomana waJefune; 7 wedzinza raIsakari, Igari mwanakomana waJosefa; 8 wedzinza raEfremu, Hoshea+ mwanakomana waNuni; 9 wedzinza raBhenjamini, Pariti mwanakomana waRafu; 10 wedzinza raZebhuroni, Gadhieri mwanakomana waSodhi; 11 wedzinza raJosefa,+ achibva kudzinza raManase,+ Gadhi mwanakomana waSusi; 12 wedzinza raDhani, Amieri mwanakomana waGemari; 13 wedzinza raAsheri, Seturi mwanakomana waMikaeri; 14 wedzinza raNaftari, Nabhi mwanakomana waVhofisi; 15 wedzinza raGadhi, Geueri mwanakomana waMaki. 16 Aya ndiwo mazita evarume vakatumwa naMozisi kuti vanosora nyika yacho. Uye Mozisi akapa Hoshea mwanakomana waNuni zita rekuti Joshua.*+ 17 Mozisi paakanga achivatuma kuti vanosora nyika yeKenani, akati kwavari: “Kwidzai kuNegebhu, mokwira kumakomo.+ 18 Munofanira kuona kuti nyika yacho yakamira sei,+ kuti vagari vemo vane simba here kana kuti havana, vashoma here kana kuti vazhinji, 19 nyika yacho yakanaka here kana kuti yakaipa, uye kuti maguta avanogara ndeemisasa here kana kuti akavakirirwa. 20 Uye muone kana ivhu racho rakaorera* kana kuti risina,*+ uye kuti kune miti here kana kuti hakuna. Munofanira kushinga,+ mutore zvimwe zvibereko zvenyika yacho.” Uyu wakanga uri mwaka wemazambiringa aitanga kuibva.+ 21 Saka vakaenda, vakanosora nyika yacho kubvira kurenje reZini+ kusvika kuRehobhu,+ pedyo neRebhohamati.*+ 22 Pavakakwidza kuNegebhu, vakasvika kuHebroni,+ kwaigara Ahimani, Sheshai, naTarimai,+ vakaberekwa naAnaki.+ Hebroni yakanga yavakwa makore manomwe Zoani yeIjipiti isati yavakwa. 23 Pavakasvika kuBani reEshkori,*+ vakatema bazi raiva nesumbu rimwe chete remazambiringa, raitofanira kutakurirwa pabango nevarume vaviri, uye mapomegraneti* nemaonde.+ 24 Vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Bani reEshkori,*+ pamusana pesumbu rakatemwa ipapo nevaIsraeri. 25 Vakadzoka kubva kunosora nyika papera mazuva 40.+ 26 Saka vakadzoka kurenje reParani, kuKadheshi+ kwaiva naMozisi naAroni neungano yese yevaIsraeri. Vakadzoka neshoko kuungano yese, vakavaratidza michero yenyika yacho. 27 Izvi ndizvo zvavakaudza Mozisi: “Takapinda munyika yamakatituma, chokwadi inoyerera uchi nemukaka,+ uye izvi ndizvo zvibereko zvayo.+ 28 Asi vanhu vanogara munyika yacho vakasimba, maguta avo akakomberedzwa nemasvingo uye makuru kwazvo. Takaonawo vaya vakaberekwa naAnaki.+ 29 VaAmareki+ vagere munyika yeNegebhu,+ uye vaHiti, vaJebhusi,+ nevaAmori+ vagere kumakomo, uye vaKenani+ vagere pedyo negungwa+ uye vakatevedza Jodhani.” 30 Karebhi akabva aedza kudzikamisa vanhu pavakanga vakamira pamberi paMozisi, achiti: “Ngatiendei izvozvi, tinoitora, nekuti tinotoikunda chete.”+ 31 Asi varume vakanga vaenda naye vakati: “Hatikwanisi kunorwisana nevanhu ava, nekuti vakasimba kutipfuura.”+ 32 Uye vakaramba vachitaurira vaIsraeri mashoko anopedza simba+ nezvenyika yavakanga vanosora, vachiti: “Nyika yacho yatakaenda kunosora, inyika inoparadza vagari vayo, uye vanhu vese vatakaona imomo varume vakanyanyisa kukura.+ 33 Tiri ikoko takaona vaNefirimu, vanakomana vaAnaki,+ vakabva kuvaNefirimu, uye kana tichizvienzanisa navo taizviona sehwiza, uye ndiwo maonero avaitiitawo.”
^ Kana kuti “vanoongorora.”
^ ChiHeb., “rakakora.”
^ ChiHeb., “rakaonda.”
^ Kana kuti “Rwizi rwaEshkori.” Eshkori zvinoreva kuti, “Sumbu Remazambiringa.”